Somalia:Madaxweynaha & G. Baarlamaanka oo Khudbado ka jeediyay munaasabadda 26-ka June- Dhageyso | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > SOMALI NEWS, Somaliland, TFG Somalia	> Somalia:Madaxweynaha & G. Baarlamaanka oo Khudbado ka jeediyay munaasabadda 26-ka June- Dhageyso
Somalia:Madaxweynaha & G. Baarlamaanka oo Khudbado ka jeediyay munaasabadda 26-ka June- Dhageyso
Madaxweynaha dowladda Federaalka KMG ah ee Soomaaiya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay Khudbad dheer ka jeediyay xafladda munaasabadda 26-ka oo ku ah 51guuradii ka soo wareegtay markii ay xorriyadda qaateen gobollada woqooyi ee dalkeena.
Madaxweynah Shariif wuxuu ugu horreyn umadda ugu hambalyeeyay munaasabaddan, isagoo xusay una duceeyay dhammaan dadkii ka shaqeeyay in dalku uu xor noqdo, isagoo umaddana ugu baaqay in ay ilaaliyaan midnimada iyo xornimada waddanka.
Mudane Shariif Sheekh Axmed wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay maanta ka aqoon badan yihiin kuwii 1960kii xorriyadda dhaliyay, ayna ka Imkaaniyaad badan yihiin, isagoo Soomaalida ugu baaqay sidii loo ilaalin lahaa midnimada iyo Xornimada waddanka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in casrigaan aysan jiri karin ummad noolaan karta dowlad la’aan, wlaiba ay muhiim tahay in dowladdaasi ay noqoto mid leh astaamo gaar ah, wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay midnimo ka doortaan kala go’ iyo kala qeyb sanaan.
Si loo hagaajiyo midnimada ummada wuxuu sheegay in loo baahan yahay in marka hore laga midoobo mabaadii’ badan, kaddibna loo wada jeesto midnimada, dowladnimada, xornimada iyo Nabadda, Al-Qaacidda iyo Al-Shabaab ayuu madaxweynuhu ku sheegay gummeysi heysta umadda Soomaaliyeed, halka Jahliga iyo Cudurka uu ku sheegay cadow kale oo u baahan in laga gudbo.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowladda Federaalka KMG ah ay ka shaqeyneyso in ay sugto ammaanka dalka, ayadoo ka faa’iideysaneysa dadka Aqoonta iyo kartida leh ee dalka u dhashay, wuxuu soo qaatay in Diintu ay na fareyso in aan abbaarno wanaagga, Daacadnimada, awoodda iyo Cilmiga ayuu sheegay in ay aasaas u tahay hoggaanka Islaamka, dowladduna ay xuli doonto dad intaas leh oo dalka dhibaatada ka saara.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayuu madaxweynuhu ugu baaqay in ay ansixiyaan R/wasaaraha ayna aqbalaan codsigiisa, wuxuu sidoo kale R/wasaaraha ugu baaqay in uu soo dhiso xukuumad wanaagsan oo marxaladda dalka wax ka qaban karta, wuxuuna sheegay in xukuumaddaasi iyo dowladduba ay ahmiyadda 1aad siin doonaan arrimaha ammaanka dalka.
Abaaraha ka jira dalka ayuu madaxweynuhu ka hadlay iyo dhibaatada heysata dadka barakacayaasha ah ee gudaha ku sugan iyo kuwa qaxootiga ah ee dalalka dibadda ku dhibaateysan, wuxuuna umadda ugu baaqay in ay gargaar siiyaan dadka walaalahooda ah ee dhibaateysan, Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu umadda ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka, oo inta ammaanka laga shaqeynayo ay wadaan ayaguna dib u dhiska dalka.
Madaxweyne Shariif ayaa sheegay in dowladda FKMG ah ay kaalinta 1aad ugu jirto dhisidda ciidanka XDS, wuxuu tilmaamay in bilihii la soo dhaafay waqtiga la geliyay ay ka soo dhalaaleen ciidamadu, isagoo tilmaamay in Ciidan xirfad leh oo wax qaban kara la doonayo in laga dhigo mustaqbalka dhow, wuuna bogaadiyay howshii ay qabteen isagoo ku amray in ay horay u sii socdaan.
Intii uu khudbaddiisa watay wuxuu madaxweynuhu u mahad celiyay R/wasarihii hore ee dalka mudane Maxamed C/llaahi Maxamed iyo golahiisa wasiirada, wuxuuna sheegay in munaasabadda 26-ka juun oo ah habeen farxadeed uu ugu talo galay in lagu daro Shahaado Sharaf la siinayo Mudane Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo.
Madaxweynaha oo ay garab taagan yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo R/wasaaraha xukuumadda ayaa Shahaado Sharaf guddoonsiiyay R/wasaarihii hore, wuxuuna u sheegay in loo baahan yahay taladiisa iyo shaqadiisa, isagoo ugu baaqay in uu gacan ka geysto badbaadinta dalka.
HALKAAN KA DHAGEYSO KHUDBADDA MADAXWEYNAHA
Guddoomiyaha Baarlamaanka Khudbadii uu jeediyay Xalay
Guddoomiyaha Baarlamaanka FKMG mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa hadal kooban ka jeediyay munaasabaddii 26-ka Jun ee xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada qaranka.
Wuxuu sheegay in umadda Soomaaliyeed ay u dabaal degeyso Munaasbad Qiimo badan, wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in la midoobo si dhibaatada umadda looga saaro, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii dalka looga xoreyn lahaa kooxda Shabaab oo ka mid ah cadowga ugu daran ee waddanka.
Guddoomiyuhu wuxuu Sheegay in Baarlamaanka looga baahan yahay in ay anisixiyaan R/wasaaraha cusub si uu howshiisa u qabsadom, wuxuuna tilmaamay in uu kaalin wanaagsan ka qaadan doono arintaasi hase yeeshee go’aanka ansixinta ay leeyihiin Baarlamaanka, isagoo ka jawaabayay codsigii R/wasaaraha ee ahaa in la anisixiyo isaga iyo xukuumadda uu soo dhisi doono si dalka ay ugu shaqeeyaan.
Soomaalida ayuu ugu baaqay in ay is cafiyaan guddoomiyuhu isagoo kaddib khudbadda ku soo dhaweeyay madaxweynaha Dowladda Federaalka KMG ah mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
HALKAAN KA DHAGEYSO KHUDBADDA GUDDOOMIYAHA BAARLAMAANKA
Tags: Hargeisa, Munaasabadda 26-ka June, Muqdisho, POLITICS, SOCIETY, SOMALIA, Somaliland
DJibouti:Dalka Jabuuti oo ay ka socoto qabanqaabada xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya – Daawo Sawirrada Munaasabadda 26-ka June